Avelao ny hafatrao Sintomy ho PDF
Ny fiarovana azo antoka Mde dia namboarina tamin'ny alàlan'ny haitao farany mba hanatsarana ny fiarovana sy ny fahamoran'ny vahinin'ny hotely. Ireo safira niomerika dia sariaka amin'ny mpampiasa, manome fiarovana faran'izay betsaka ary ampandehanin'ireo mpandeha mandroso farany.
Kaodim-pifehezana Master Manager sy fanalahidy override hahazoana fidirana maika.
Keypad LED LED misy tampoka amin'ny mpampiasa marobe.
Kaody 4-6 isa Pin miaraka amin'ny famerenana rehefa misokatra ny varavarana.
Fanairana fampitandremana ambany maso
Ny Optional Hand dia nanao lalan-kaonty fanaraha-maso tamina sarany fanampiny, izay manoratra ny fisokafan'ny 100 farany an'ny fiarovana.
Ny daty dia azo alamina hamelana ny fanaraha-maso ny fanaraha-maso amin'ny fampiasana tombo-kase / daty.
Nomena bateria alkaly 4 x AA.
Mety hitahiry ny ankamaroan'ny solosaina finday sy ny takelaka finday amin'ireo zavatra sarobidy hafa.
Azo ahodina amin'ny alàlan'ny fototra na aoriana mankany amin'ny gorodona na rindrina (fonosana fanamboarana omena).
Ahoana ny fampidirana azy:
Lavaka mialoha ny fandavahana ao anaty rindrina sy rindrina azo antoka.
Nomena amina bolt fametahana mba hahazoana rindrina biriky na gorodona vita amin'ny beton.
Apetraho amin'ny toerana azo antoka ary asio marika ireo teboka fandavahana amin'ny alàlan'ny lavaka mialoha ny fandavahana.
Esory ny fitoeram-bola ary manaova lavaka amin'ny alàlan'ny fandavahana elektrika miaraka amina fantsona fandavahana.
Avereno milamina ny toerany, ampidiro ny kofehy ary ataovy izay hamafisana mba hiarovana azy.
Tsy azo sakanana ny bolt raha tsy misokatra ny varavarana azo antoka.
Teo aloha: Tabilao azo antoka nomerika an-trano fandraisam-bahiny nomerika misy ny Laptop Size K-BE200H
Next: Factory vidéo nomerika tenimiafina elektronika azo antoka amin'ny trano fandraisam-bahiny K-BE200
Kaody elektronika boaty azo antoka
Boaty azo antoka Electronic Lock
Boaty azo antoka efitrano
Top box Safe Safe
Hafanàm-po an Key Safe Box , manasa-Ny Mpitarika Mini Bar Fa Hotel Room , Electronic Office Safe Box , Small tondro Safe , Small Size Hotel Safes Ary Boxes Safe petra-bola , tantera-drano Cash Box , trano rehetra Products